फोक्सोलाई स्वास्थ र तन्दुरुस्त राख्न ५ साधारण विधि - Gaunbeshi
फोक्सोलाई स्वास्थ र तन्दुरुस्त राख्न ५ साधारण विधि
Posted on ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार ०७:४० Author Gaunbeshi Comment(0)
काठमाडौँ। मनाव शरीरको एक अति महत्वपूर्ण र सबैभन्दा सक्रिय अंग हो, फोक्सो। फोक्सोकै कारण शरीरका विभिन्न कोशीकाहरुले आवश्यक मात्रामा अक्सिजन पाउने गर्दछन्। श्वासप्रशासको क्रममा फोक्सोले शरीरबाट कार्बोनडायोक्साइड ग्यासलाई फ्याल्न मद्दत गर्दछ । एक स्वस्थ व्यक्तिले एक दिनमा लगभग २५ हजार पटक सास फेर्ने गर्छन् ।
नदेखिने अंग भएका कारण प्रायःजसो मानिसहरुले सास फेर्न कुनै समस्या नभएसम्म फोक्सोको स्वास्थ्यलाई प्रायः उपेक्षित गर्ने गर्छन। दम, ब्रोन्काइटिस, निमोनिया, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी), फाइब्रोसिस, क्षयरोग,एक्युट रेस्पिरेटरि डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम (एआरडीएस) फोक्सोको क्यान्सर इत्यादी जस्ता रोगहरु फोक्सोको संक्रमणका कारण उत्पन्न हुनसक्छन्।
धुमपान र मध्यपानबाट टाढा रहनुहोस् – फोक्सोलाई संक्रमण र यसलाई अस्वास्थ्य पार्ने कारक तत्व हुन्, धुमपान र मध्यपान। चुरोटको धुँवामा हजारौं हानिकारक रसायनहरू हुन्छन्, जसले तपाईंको शरीरलाई हानी गर्दछ। धूमपानले फोक्सोको क्यान्सर र सीओपीडी जस्ता गम्भीर फोक्सोको रोगहरु निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईं धुमपान गर्नु हुन्न भने पनि फोक्सोलाई सम्भावित नोक्सानीबाट जोगाउन अरुले उडाएको चुरोटको धुवाँबाट पनि जोगिनुहोस्।
दुषित हावा तथा प्रदूषणबाट जोगिनुहोस् – हावामा रहेका धेरै दुषित तत्वले फोक्सोमा गम्भीर असर पर्नुका साथै प्रदूषणले सम्पूर्ण स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ। उदाहरणको लागि विभिन्न लोन्ड्रीहरुमा प्रयोग गरिएको सिन्थेटिक गन्ध र थुप्रै कारखानाबाट हावामा छोडिएका विषाक्त रसायनले पनि फोक्सोलाई संक्रमण गर्न सक्छन्।
गहिरो श्वासप्रश्वासको व्ययाम गर्नुहोस् – पर्याप्त अक्सिजन आपूर्तिको अभावले फोक्सोमा समस्या निम्त्याउनुका साथै मुटु रोगको जोखिम पनि बढाउन सक्छ । नियमित रूपमा गहिरो सास फेर्ने व्यायामको अभ्यासले फोक्सोलाई सुदृढ बनाउन र अन्य अंगहरूमा निर्मित विषाक्त पदार्थहरू पनि हटाउन मद्दत गर्दछ।
सहि आहारको चयन गर्नुहोस् – फोक्सोलाई स्वास्थ र तन्दुरुस्त राख्न आफ्नो आहारमा सहि मात्रामा एन्टिअक्सिडेण्ट्स, प्रोटीन, फोलेट र उपयुक्त कार्बोहाइड्रेटहरूजस्ता पोषक तत्वहरूको मिश्रण रहेको निश्चित गर्नुहोस्। यी पौष्टिक तत्त्वहरूले फोक्सोको स्वास्थ्य कार्यहरूलाई बढवा दिने गर्दछ र फोक्सोबाट हानिकारक विषाक्त पदार्थहरूलाई हटाउन मद्दत गर्दछ। साथै, ट्रान्स फ्याट र स्याचुरेटेड फ्याट भएका खानाहरुलाई आफ्नो आहारबाट कटौती गर्नुहोस्।
नियमित व्यायम – नियमित व्यायमले फोक्सोको स्वास्थ्य मात्र नभएर सम्पूर्ण शारीरको स्वास्थ्यलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। नियमित व्यायाम गर्दा फोक्सोको कार्यक्षमता बढ्नुका साथै यसले मुटु र मांसपेसीहरूमा अक्सिजनलाई सजिलैसँग आपूर्ति गर्दछ।
कोभिडसँग लड्ने क्षमता विकासका लागि कस्तो खाने ? (विज्ञहरुको सुझाव)
Posted on २ कार्तिक २०७७, आईतवार १६:२० Author Gaunbeshi
काठमाडौं । कोभिड संक्रमणबाट जोगिन दैनिक गतिविधिमा सुधार गर्दै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा रोगसँग लडने क्षमताको विकास गर्नु नै उत्तम विकल्प भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । त्यसका लागि दैनिक गतिविधि र खानपिनमा नै ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दएका छन् । आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. ऋषिराम कोइरालाले […]
जमराको जुसः यस्ता छन् विशेष फाइदाहरु
Posted on ११ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०८:०२ Author Gaunbeshi
जौपौष्टिक गुणयुक्त अन्न हो । चिकित्सा विज्ञानमा यसलाई औषधिका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसैले जौको जमरालाई सांस्कृतिक मात्र नभई स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत अति उपयोगी मानिन्छ । पछिल्लो समय जमराको जुस बनाएर खाने प्रचलन बढेको छ । आयुर्वेदमा जौ लाई विशेष औषधि मानिएको छ । जमराको जुस सेवन गर्दा रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढ्ने विभिन्न अनुसन्धानबाट […]
महिनावारीबारे जान्नैपर्ने कुरा
Posted on २४ आश्विन २०७७, शनिबार १२:१६ Author Gaunbeshi
प्रायः महिलाहरु महिनावारीका बारे कुरा गर्न लजाउँछन् । नेपाली महिलामाझ अझै पनि महिनावारी बारे धेरै भ्रम छ । महिनावारी वा रजश्वला एउटा शारीरिक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यसप्रति कुनै पनि अन्धविश्वासको भर पर्नु हुदैन । त्यसैले हरेक महिलाले महिनावारीबारे वैज्ञानिक जानकारी लिन आवश्यक छ । महिनावारीको चक्र हरेक महिलामा फरक फरक हुनसक्छ । सामान्यता […]
नेपाली सेनाको हेलिकप्टर यसरी डोहोराउदै खरिपाटी लगियो (तस्बिर सहित)
हड्डी तथा मुटुलाई स्वस्थ राख्ने ’भिटामिन के’ यी ५ खानामा भरपुर मात्रामा पाइन्छ
कैलालीमा तस्कर समूहद्वारा एक प्रहरीको ह*त्या, एकजना सम्पर्कविहीन
Posted on २ कार्तिक २०७७, आईतवार १३:३४ Author Gaunbeshi
बिपी प्रतिष्ठानमा उपचाररत् कोरोना संक्रमित वृद्धको मृत्यु
Posted on ३ कार्तिक २०७७, सोमबार ११:०३ Author Gaunbeshi
पाथिभरा माताको दर्शन गरि माघ २ गते शुक्रबार राशिफल हेर्नुहोस्
Posted on १ माघ २०७७, बिहीबार २०:५५ Author Gaunbeshi
ललिता निवास प्रकरण : ४१ आरोपित हाजिर भए, गच्छदारसहितका ‘भिआइपी’ ले टेरेनन्
Posted on २५ आश्विन २०७७, आईतवार १२:४६ Author Gaunbeshi
माघ १४ गतेबाट कोरोना वि’रु’द्धको खोप लगाईनेः प्रधानमन्त्री ओली
अमिर खानले हरेक बर्ष अमिताभ बच्चनकी छोरी श्वेतालाई पत्र लेख्छन्, यस्तो छ रोचक कारण
प्रचण्ड(माधवले भाषण गर्ने स्टेज अगाडी ‘केपी ओली जिन्दावाद !भन्दै नारा लागेपछि
Posted on २५ भाद्र २०७६, बुधबार ०९:१३ Author Gaunbeshi
ललिता निवास प्रकरण : ७ आरोपितलाई बिना तारेख रिहा गर्न विशेषको आदेश
Posted on २६ आश्विन २०७७, सोमबार १६:२० Author Gaunbeshi
धनगढीमा बेवारिसे शव भेटियो, खोजी गर्दै जाँदा प्रहरी जवान निस्किए
Posted on २ माघ २०७७, शुक्रबार १०:५४ Author Gaunbeshi